Qiblada siyaasadda – Qatar waxaa baddelay imaaraad | KEYDMEDIA ENGLISH
Qiblada siyaasadda – Qatar waxaa baddelay imaaraad
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa goordhow ka amba-baxay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isagoo ku wajahan magaalada Abu Dhabi ee Caasimadda Imaaraadka Carabta, halkaasoo ay maanta uga bilaaban doonto booqasho labo maalin ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkii ugu horreeyay ee dalka dibaddiisa ah tan iyo markii la doortay, maanta ugu ambabaxay dalka isku-tagga Imaaraadka Carabta, halkaasoo uu ku tagao booqasho rasmi ah, kaddib casuumaad uu ka helay dhiggiisa Sheekh Maxamed Bin Zayid.
Keydmedia Online ayaa 5 June 2022, baahisay in Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Muqdisho, Danjire Maxamed Axmed Al-Othman, uu casuumaad rasmi ah oo uu ka siday Madaxweynaha dalkaas, Sheikh Maxamed, u geeyay MW Xasan, taasoo Abu Dhabi, ka dhigtay halka uu ka billaabanayo safarka diblumaasiyadeed ee MW Xasan.
U-jeedka socdaalka Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu salka ku hayo bud-dhigga wanaajinta xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya, kaas oo Dowladdii Madaxweyne Farmaajo si ula kac ah u xumeysay, iyadoo door muhiim ah siineysay xiriirka dalka Qatar oo xurguf siyaasadeed iyo xifaaltan gobol kala dhaxeeyay Imaaraadka Carabta.
“Safarka Madaxweynaha oo labo maalmood qaadan doona ayaa ku qotoma xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududeynta isu-socodka, ganacsiga iyo sare u qaadidda iskaashiga labada waddan”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Madaxtooyada soomaaliya.
Shantii sano ee la soo dhaafay qiblada siyaasadeed ee Soomaaliya waxa ay ahayd dalka Qatar, hayeeshee, in socdaalka 1-aad ee Madaxweynaha uu noqday Imaaraadka, waxa ay ka dhigan tahay in Dooxa lagu baddelay Abu Dhabi, hoosna loo dhigi doono saameyntii Tamim bin Hamad, loona guuray garabka Sheekh Maxamed Bin Zayid.
Imaaraadku, waxa ay ka mid yihiin dalalka Carbeed ee aadka u daneeya arrimaha Soomaaliya, waxaa la rumeysan yahay in ay saameeyn ku lahaayeen doorashadii Madaxweynaha ee dhacday 15 May 2022, waxa ay fursad weyn u arkaan in ay meesha ka baxeen Kooxdii Farmaajo, waxayna ku dhawaaqi doonaan mashaariic hor marineed.
Farmaajo, intii uu xaafiiska joogay wuxuuna meesha ka saaray kabkii miisaaniyadeed, howlihii caafimaadka, fududeyntii dal ku galka, tababarkii ciidanka iyo adeegyadii kale oo ay qaban jireen Imaaraadka, halka uu waxba kama jiraan ka soo qaaday hishiisyo dhex maray labada dowladood sanadkii 2014-kii.